Indlela Kudla Healthy, Lose Weight kwaye Uziva Awesome Yonke Day – Health Deo
Indlela Kudla Healthy, Lose Weight kwaye Uziva Awesome Yonke Day
Andiyithandi ukuba abeke ileyibhile icebiso lam zokutya. Oku kusekelwe kuphando lwezenzululwazi, hayi yokuziphatha, inkolo okanye inkolelo eyayikhona oko ukutya okunempilo sibe njengaye.
Kodwa xa ufuna ukuba iilebhile, ukubiza ube “Phantsi-Carb, Real-Ukutya” yokudla esekelwe (LCRF).
Yintoni Ngaba “Phantsi-Carb, Real-Ukutya” Vula Yini?
Makhe uqala ngokuchaza isuntswana kwesigama.
Kucacile ukuba abantu namhlanje abadla ukudla yahluke gqitha ukusuka ekutyeni ookhokho bethu wayephila lonke ngendaleko.
Kukho ezininzi abantu “ezikhe” ehlabathini lonke ukuba abasahlala njengoko ngokuzingela, ukudla zendalo. Aba bantu ibhityile, kwimpilo entle kwaye uninzi izifo ngokubulala abantu yasentshona ngezigidi zinqabile okanye azikho (30, 31).
Uphando lubonisa ukuba xa abantu batye ukutya zendalo ezazikho koobawo umzingeli-womhlanganisi (eyaziwa ngokuba ukutya paleolithic), bayakuyeka ubunzima ukubona ukuphucuka okukhulu kwimpilo (21, 22, 23, 24).
I-insulin hormone waziwa kakuhle indima yayo yokuba ihamba iswekile egazini kunye kwizisele. A ukuhluleka insulin, okanye ukumelana neziphumo zayo, isifo seswekile.
Kodwa insulin unezinye iindima emzimbeni. Insulin uxelela iiseli amanqatha ukuvelisa amafutha kwaye ayeke umhla wokuwiselwa phantsi namanqatha abalwenzayo. Xa amanqanaba insulin ziphezulu, umzimba ukhetha nkxu koovimba amanqatha ukunika amandla.
On ukutya Western, phezulu-carb, amanqanaba insulin ziphezulu lonke ixesha, ukugcina amanqatha ngokukhuselekileyo zitshixelwe iiseli ngamanqatha.
Carbs aba umqhubi ezingundoqo insulin secretion. A carb eliphantsi iswekile kwehlisa idayethi nezikali igazi ngoko lihlisa amanqanaba insulin (32, 33, 34).
Xa insulin ehla, umzimba ngokulula ukufikelela calories zigcinwa kwi iiseli ezityebileyo, kodwa oko kuthatha iintsuku ezimbalwa ukuba ukuqhelana ngokutshiswa namanqatha endaweni carbs (35, 36).
ukutya ekudleni sityhafile satiating kakhulu. Ukudla uya phantsi abantu baqala ukuba badle ngokuzenzekelayo calories ezimbalwa kunokuba zizitshise, nto leyo ebangela ukwehla kobunzima (37).
Inzuzo ephambili yokutya ephantsi-carb kukuba uyakwazi kudla de nenzaliseko kwaye unciphise umzimba ngaphandle kokubala calories. Yitya ezisezantsi carb kwaye uphephe isiphumo cala libi osidingayo izidlo imiqathango: yindlala.
Iinzuzo Health of a Low Carb Ukutya
Kuyinto ukungaqondi eqhelekileyo, nditsho phakathi iingcali zempilo, ukudla ephantsi-carb baphoswa akuyilugelanga impilo. Abantu abenza ngokucacileyo amabango abanjalo kwamkhathaza ukuhlola i uphando.
impikiswano zazo eziphambili kukuba izidlo ephantsi-carb mibi kuba ukuba phezulu kukutyeba ifumile, nto leyo iphakamisa cholesterol kwaye ebangela isifo sentliziyo.
Kodwa ke uphando lwakutsha nje lubonisa ukuba akukho nto yakuzixhalisa malunga nayo. Inama kumvusa HDL (elungileyo) cholesterol kwaye utshintshe i “okubi” cholesterol ukususela kwabancinane, LDL ashinyeneyo (embi kakhulu) ukuya LDL enkulu leyo nabungozi (38, 39, 40, 41).
Inyaniso kukuba namafutha akuthethi ukuba isifo sentliziyo. Oku nje intsomi elingazange singqiniwe (42, 43, 44).
eneneni izidlo elisezantsi carb-kungakhokelela ngaphezulu ukwehla ngokwasemzimbeni kunye nokuphuculwa ngakumbi ubungozi kuthelekiswa ukutya ephantsi-amafutha (45, 46).
umzimba: A ukutya esezantsi-carb, kudliwa de nenzaliseko, ngokuqhelekileyo kubangela ilahleko ngenqatha ngaphezu ukutya esezantsi-nenqatha osidingayo imiqathango (47, 48, 49).
Blood sugar: Enye linophawu seswekile kunye pathways syndrome i iswekile yegazi ophakamileyo, nto leyo luyingozi kakhulu kwithuba elide. Elisezantsi carb-ukutya iswekile osezantsi egazini (50, 51, 52, 53, 54).
wegazi: Ukuba koxinzelelo lwegazi liphezulu, udla ukuya phantsi ukutya ephantsi-carb (55, 56, 57).
triglycerides aphakamileyo: Ezi amafutha ukuba ukuhamba egazini kwaye nobangela uphambili ukuba isifo sentliziyo. Elisezantsi carb-izidlo triglycerides asezantsi ngaphezulu kakhulu kunokuba izidlo ephantsi-amafutha (58, 59, 60).
HDL (elungileyo) cholesterol: Ngokubanzi nje, ukuba ngaphezulu cholesterol “elungileyo” kuthetha ukuba usemngciphekweni osezantsi yesifo sentliziyo. izidlo elisezantsi carb-ukukhulisa HDL cholesterol ngaphezulu kakhulu kunokuba izidlo ephantsi-amafutha (61, 62).
sdLDL (mbi) cholesterol: izidlo elisezantsi carb-kunokubangela LDL cholesterol ukutshintsha ukususela kwabancinane, LDL ashinyeneyo (embi) ukuya LDL enkulu, nto leyo nabungozi (63, 64).
Lula: izidlo elisezantsi carb-zibonakala lula ukunamathela ngaphezu izidlo ezisezantsi amafutha, mhlawumbi ngenxa yokuba akukho mfuneko kilojoules balambe, nto leyo lolona isiphumo ebezingalindelekanga ngokunciphisa (65, 37).
Iingxelo ngasentla abonise ukuba kunjalo amalingo alawulwayo angathathi cala – izifundo zenzululwazi ukuba umgangatho legolide zophando.
Common Low-Carb Side Iziphumo isiXhosa
Xa carbs kwi ekutyeni kufakwe protein kunye namanqatha, izinto eziliqela kufuneka kwenzeke ukuba umzimba ukusebenzisa amafutha ngokufanelekileyo zibe kukudla.
Kuya kubakho utshintsho olukhulu hormone umzimba kufuneka iba imveliso enqanda ukuqala uvutha ikakhulu ngamanqatha endaweni carbs. Oku kuthatha iintsuku ezimbalwa kunye nolwamkelo ngokupheleleyo kungathatha iiveki.
ziphumo bezingalindelekanga Common kwiintsuku zokuqala ezimbalwa ziquka:
miphumela idla wobulali nto yakuzixhalisa malunga. Umzimba wakho sele umlilo ubukhulu becala carbs amashumi eminyaka, kuthatha ixesha ukuqhelana usebenzisa amanqatha njengomthombo amafutha zaseprayimari.
Oku kuthiwa “yomkhuhlane eliphantsi carb” kwaye kufuneka ibe ngaphezulu kwiintsuku 3-4.
On ukutya esezantsi-carb, kubaluleke kakhulu ukuba nidle amanqatha ngokwaneleyo. Amafutha ngowona mthombo entsha zepetroli umzimba wakho. Ukuba udla esezantsi-carb kunye esezantsi-nenqatha, ngoko uza va baze bashiye yonke into.
Enye into ebalulekileyo ukuba uziqaphele ukuthi insulin yenza izintso sibambelele sodium. Xa udle carbs ngaphantsi, izintso ukumkhulula sodium. Esi sesinye sezizathu abantu balahlekelwa ezidala kunye ubunzima amanzi kangaka kwiintsuku zokuqala ezimbalwa.
Ukuze sizikhusele kula ilahleko sodium ungadibanisa ityuwa ekutyeni yakho okanye bangasezwa ngendebe umhluzi yonke imihla. A cube bouillon iqhawulwa indebe yodwa yamanzi ashushu iqulethe 2 grams sodium.
Abantu abaninzi bathi baziva ngcono kunangaphambili kwi ukutya esezantsi-carb, xa ixesha sokuqala nokwamkela phezu.
Ukuba ngaba uziva okulungileyo, ukudibanisa amanqatha ngakumbi kesodiyam kufuneka awugcine.
IsiCwangciso Meal Oko Ngaba Gcina Ubomi Bakho
Esi sisicwangciso isidlo isampulu iveki enye onikezela ngaphantsi kwe-50 iigrem carbs ngosuku.
Usuku 1 – Mvulo:
Breakfast: omelet kunye nemifuno ezahlukeneyo, agcadwe ibhotolo okanye amafutha yekhokhonathi.
Isidlo sasemini: iyogurt Ingca-wadliswa iiblueberries kunye neqaqobana neeamangile.
Dinner: Cheeseburger (akukho Bun), wakhonza kunye nemifuno kunye salsa sauce.
Usuku 2 – Tuesday:
Breakfast: Bacon kunye namaqanda.
Isidlo sasemini: burger Isosi nemifino nobusuku ngaphambili.
Dinner: Iisalmon ebilisiweyo ibhotolo kunye nemifuno.
Usuku 3 – NgoLwesithathu:
Breakfast: Amaqanda kunye nemifuno, agcadwe ibhotolo okanye amafutha yekhokhonathi.
Isidlo sasemini: Shrimp isaladi amafutha omnquma.
Dinner: yenkuku eqhotsiweyo kunye nemifuno.
Usuku 4 – ngoLwesine:
Isidlo sasemini: Smoothie kunye nobisi lwawo, namaqunube, iiamangile kunye ziiprotein powder.
Dinner: Steak nemifino.
Usuku 5 – Lwesihlanu:
Isidlo sasemini: Chicken isaladi amafutha omnquma.
Dinner: iziqa Inyama yehagu kunye nemifuno.
Usuku 6 – ngoMgqibelo:
Breakfast: omelet kunye nemifino ezahlukeneyo.
Isidlo sasemini: iyogurt Ingca-wondleke kunye namaqunube, kukubola ikhokhonathi kunye neqaqobana walnuts.
Dinner: Meatballs kunye nemifuno.
Usuku 7 – ngeCawe:
Isidlo sasemini: Smoothie kunye nobisi lwawo, nentwana cream enzima, itshokolethi-eliphekwe nomgubo iiproteins kunye amaqunube.
Dinner: nomvuzo amaphiko yenkuku kunye isipinatshi ekrwada ecaleni.
Yenza konke okusemandleni akho ukuze neendidi imifuno kwisidlo sakho. Ukuba ufuna ukuhlala ngezantsi 50g of carbs ngosuku unga ngokukhuselekileyo unayo enye iziqhamo okanye ezinye amaqunube yonke imihla.
ukutya Organic kunye nengca-wondla mihle, kodwa kuphela ukuba unako lula ukufikelela kuzo. ukwenza nje umgudu ukuze ukhethe sisoloko ukhetho ubuncinane ukuqhubekekiswa ngaphakathi kuluhlu lwakho ixabiso.
Akukho bungqina yenzululwazi ukuba ufanele utye ngaphezulu kwe-3 ngosuku. Ukuba bendilambile phakathi kwezidlo, apha i iingcamango ezimbalwa okulula ukuba zisempilweni, ngokulula ephathwayo kunye emnandi.
A abambalwa nati
Abanye sisi nenyama
ఆరోగ్యకరమైన తినడానికి ఎలా, బరువు లూస్ మరియు ప్రతి రోజు బ్రహ్మాండం ఫీల్
Hvernig á að borða hollt, Missa Þyngd og Feel Awesome Every Day